Timisoara, ya na amara ndi Romania | Akụkọ Njem
Mariela Carril | | Ihe ị ga-ahụ, Romania
Ebe Ọwụwa Anyanwụ Europe Ọ bụ amara nke akara aka. Ọtụtụ narị afọ nke akụkọ ihe mere eme na usoro ndọrọ ndọrọ ọchịchị ahapụwo akara ha ma nwee obodo ndị mara mma. Ọmụmaatụ, Timisoara, nke dị na Romania.
Timosara ọ bụ obodo nke atọ kacha buo ibu na mba ahụ na nnukwu ụlọ ọrụ dị na ọdịda anyanwụ Romania. Anyị ga-ahụ taa ihe kpatara eji mara ya Obere Vienna ma ọ bụ Obodo okooko osisi...
2 Timisoara Nlegharị Anya
Aha ahụ na-enweta site na Hungarian na ntọala izizi laghachi azụ n'oge, ọbụlagodi ndị Rom. Ka oge na-aga, ọ malitere na Middle Ages, gburugburu ebe ewusiri ike nke Carlos I nke Hungary wuru, a makwaara na ọ dị n'oge agha dị n'etiti ndị Kraịst na ndị Ottoman Turks, obodo dị nsoka. Ya mere, ọ tara ahụhụ ọtụtụ mbuso agha na mwakpo ruo mgbe ọ dị n'aka Ottoman ihe karịrị otu narị afọ na ọkara.
Onyeisi Eugene nke Savoy nwetaghachiri Timisoara na 1716 wee nọrọ n'aka ndị Habsurgs ruo mmalite nke narị afọ XNUMX. Mgbe agha ụwa nke mbụ gachara Hungary nyefere obodo ahụ na Romania, na n’oge a na-alụ Agha Worldwa nke Abụọ, ọ kpatara ọtụtụ mbibi. N'ikpeazụ, batara n'okpuru orbit Soviet, ọnụ ọgụgụ ya mụbara ma mepụta ya.
Obodo dị na ndagwurugwu Banat, na nso nkewa nke osimiri Timis na Bega. E nwere ebe apiti ebe a ma obodo ahụ bụ ogologo oge naanị ebe ị nwere ike ịgafe mpaghara ahụ.
N'ezie, ọ na-ejekwa ozi dị ka ihe nchebe, ọ bụ ezie na nso nke iru mmiri dị ukwuu wetara ọtụtụ pests na ya. Na narị afọ nke XNUMX, n'ihi ọrụ ọha na eze, obodo ahụ malitere ịdị na canal Bega ma ọ bụghị n'osimiri Timis, mgbe ahụ ihe niile ka mma.
Na ọdịnala, ọ bụrụla obodo etinyere maka nrụpụta, agụmakwụkwọ, njem na azụmahịa. Taa ọ nwere Usoro njem na asaa tram ahịrị, asatọ trolley ụgbọ ala na ihe karịrị iri abụọ ụgbọ ala ahịrị. Ọzọkwa enwere igwe kwụ otu ebe na 25 ụgbọ na 300 anyịnya igwe na ike ga-eji free, ma ndị obodo ma ndị njem nleta, na e nwere a vaporetto nke na-asọba ọwa ahụ. Ọzọkwa ọha.
Timisoara Nlegharị Anya
Obodo ahụ enweghị ọtụtụ ebe ngosi ihe mgbe ochie dịka obodo ndị ọzọ dị na Europe, mana ọ bụrụ na ị bụghị ahụhụ ọdịbendị ị nwere ike ịmasị echiche nke ịghara ịga na ebe ngosi ihe mgbe ochie na veranda ụbọchị niile. Yabụ, Timisoara na-enye anyị a ọnụ ọgụgụ dị nta nke ihe ngosi nka na-akpali mmasị:
el Timisoara Museum nke Art Ọ dị na Unirii Square ma ọ bụ ụlọ nke narị afọ 10. Enwere mpaghara, nke oge a, nka eji achọ mma, eserese na ihe osise na nka ndị Europe n'ozuzu ha na enwekarị ihe ngosi na ihe omume. Ntinye aka na-akwụ RON 10 ma mepee site na Tuesday ruo Sọnde site na elekere iri nke ụtụtụ ruo elekere isii nke mgbede.
el Banat National Museum ọ bụ onye nnọchi anya mpaghara ahụ. Ọ na-arụ ọrụ na Huniade Castle, nke dị n'etiti obodo ahụ, n'ụlọ kacha ochie n'obodo ahụ. E nwere ọtụtụ ngalaba: nkà mmụta ihe ochie, akụkọ ihe mere eme, sayensị ụwa na Ianlọ ihe nkiri Traian Vuia, raara nye onye Romania mepụtara otu aha ahụ, ọsụ ụzọ ụgbọelu.
el Obodo ngosi nka obodo Ọ dị na mpụga Timisoara, na-acha akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ ma gosipụta nke ọma ihe ezigbo obodo bụ. O nwere otutu ulo, ulo uka na igwe ihe ubi, odinala ha nile nwere ya site na oge na mpaghara di iche na Banat. Ọ bụ ije dị mma ma ọ dị nso na zoo ka ị nwee ike ịga ebe abụọ ahụ. Na-abata ụgbọ ala na ọnụ ụzọ na-efu 5 RON. O nwere oge ọkọchị na udu mmiri.
el Ndị Kọmunist Consumer Museum ọ bụghị ọdịnala. Ọ bụ obere ụlọ ngosi ihe mgbe ochie na-egosipụta kpọmkwem oge ọchịchị Kọmunist nke obodo ahụ. Ọ na-arụ ọrụ na okpuru ala nke Scart Bar, na ụlọ ochie na nnukwu ogige. Ọ bụ a enyi na enyi ebe amara mma. Nchịkọta ihe ngosi nka nwere ihe niile ma kee ya site na onyinye sitere na ndị enyi na ndị ọbịa. Ihe niile metụtara oge komunizim. Chọta ya na Szekely Laszlo 1 Arh.
el Ncheta nke mgbanwe cheta n’afọ 1989 mgbe ndi Soviet Union kewara. Mgbanwe nke Romania malitere ebe a na Timisoara ma bụrụkwa akara na obodo. E kwesiri ka saịtị a bụrụ nwa oge ma n'oge ụfọdụ a ga-enwe ụlọ ihe ngosi nka banyere ya. Ememe ncheta a dị na Calle Popa Sapca, 3-4 na ọnụ ụzọ na-efu 10 RON. Ọ na-emepe na Mọnde ruo Fraịdee, site na elekere asatọ nke ụtụtụ ruo elekere anọ nke mgbede na Satọdee site na elekere 8 nke ụtụtụ ruo elekere abụọ nke ehihie.
Dị ka ị hụrụ enwere ụlọ ngosi ihe mgbe ochie ya mere enwere otutu oge maka ụdị nleta ndị ọzọ. Timisoara bụ nnukwu obodo nwere akụkọ ihe mere eme kemgbe ọ dịkarịa ala narị afọ nke iri na anọ, yabụ ugbu a jee ije n'okporo ámá ya Ọ bụ amara.
Yabụ, na nleta mbụ ị kwesịrị ịghara ịhapụ isi ihe ụfọdụ ọkachasị. Ya bụ, ndị Ogige Union, nke kacha ochie n’obodo a. Aha ya malitere na 1919, mgbe Agha Worldwa Mbụ gasịrị, dị ka ndị agha Romania gbakọtara ebe a mgbe ha banyere n'obodo ahụ.
Nwere a ikuku baroque ụlọ ndị gbara ya gburugburu bụ Chọọchị Ọtọdọks nke Serbian, Chọọchị Roman Katọlik, ülọ Brück na Obí Baroque. Ihe niile mara ezigbo mma. Enwekwara kafe, yabụ n'oge ọkọchị ọ na-atọ ụtọ ịnọdụ ala na ịnyịnya ndị mmadụ. Ebe ọzọ na-adọrọ mmasị bụ Ogige Victoria, a makwaara dị ka Opera Square. Aha ọhụrụ ahụ bụ mgbe ọdịda nke ọchịchị Kọmunist daa.
Ejiri ụlọ ihe atụ abụọ rụọ square ahụ: Katidral nke Ọtọdọks site n'akụkụ ndịda na Theaterlọ ihe nkiri mba site n’ebe ugwu. E wuru ya na narị afọ nke XNUMX iji dochie ụlọ ochie ochie, ya mere ọ nwere mmetụta nke Art-Noveau ma bụrụkwa nke a chọrọ stroll, na ụlọ ahịa, ụlọ ahịa na mbara ala. Ọ bụrụ n’ị gaa n’oge ekeresimesi, enwere ahịa ekeresimesi.
Ọzọ dị ukwuu na-agba ịnyịnya bụ jee ije n'akụkụ osimiri Bega. Ma ọ bụ mee njem ahụ site na igwe kwụ otu ebe. Ọ dị mma ụbọchị anwụ na-acha, ị nwere ike ịga site na nsọtụ ruo na njedebe nke obodo ahụ, na-agafe ogige ntụrụndụ ya. N’oge ọkọchị Enwere ọtụtụ ụlọ ebe ị nwere ike ịnụ ụtọ biya biya ma mgbe anyanwụ dara ọ bụkwa ebe na-ewu ewu.
N'ikpeazụ, enwere m mmasị ịfefe obodo ma lee ị nwere ike ime ya site na ụgbọ elu. Gbọ elu ahụ bụ ọkara elekere ma na-efu ihe dị ka euro 75. Ma ọ bụrụ na mgbe anyanwụ dara, ịchọrọ ịpụ hụ ndị mmadụ, ọdịmma obodo nwere ndụ abalị na-arụ ọrụ. A hyper ama saịtị bụ D'arc, na Ogige Unirii. Ezigbo egwu, ọnụahịa dị ala, nke ndị mba ọzọ na ndị ọpụpụ na-ewu ewu. Ọ dabara na ọ na-emepe n'oge, site na elekere 11 ruo elekere ise nke ụtụtụ.
Ebe ọzọ noct abalị bụ - Reflektor, nke mepere na 2017, concert hall. 80 nke Pub Ọ bụ otu n'ime ọtụtụ ụlọ mmanya na Timisoara ebe ị nwekwara ike ị drinkụ mmanya, ịgba egwu. Ọ bụghị n'etiti, mana ọ bụrụ na ị si '80s, ọ bara uru ịga ụlọ akwụkwọ mahadum. Taine na capezọ Mgbapụ bụ ebe ndị ọzọ ịgba egwu ma nwee anụrị.
Ọ masịrị Timisoara? Ọ bụ ebe nwere ike iru (biya biara na euro 1, nri ehihie 25), ọ dị nso na naanị awa atọ site na Budapest na Belgrade na ise site na Vienna.
Ọ bụ obodo ọdịbendị ịhụnanya, ememme nkiri na ihe nkiri, nwere ezigbo gastronomy na ndi mmadu di nma ma omenala. Ihe owuwu ya mara mma, o nwere akụkọ ihe mere eme, o nwere ndụ abalị, ndị mmadụ na-asụkarị Bekee na dịka akụkọ ihe mere eme, Timisoara bụ obodo izizi ịtọhapụ onwe ya mgbe ọdịda ọchịchị Kọmunist dara.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » Getaways Europe » Romania » Timisoara, ya na amara ndi Romania